Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 23, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Polite mafomula ekudzivisa pakupera kweemail
Mitsara isina basa, mafomula asina kunaka, zvipfupiso kana kuunganidzwa kwemafomula... Aya ese mashandisirwo panoperera tsamba izvo zvakakodzera kusiiwa. Iwe unozowana zvakawanda nekuwedzera kuita mune mafomula pakupera kweiyo email. Zviri pamusoro pekubudirira kwezvinangwa zvakakurudzira sarudzo yekunyora email. Kana iwe uri mushandi wemuhofisi kana mumwe munhu anogara achitumira email kubasa, chinyorwa ichi ndechako. Iwe pasina mubvunzo uchavandudza hunyanzvi hwako hwekunyora tsamba.
Mimwe mienzaniso yemafomula ausingafanire kusarudza
Izvo zvakakosha kutsvedza mutsara une hunhu pakupera kweemail, asi kwete chero ipi zvayo.
Maformula akajairwa kana akaumbwa nemitsara isingakoshi
Kupedza email yehunyanzvi ine fomula inobatika kunopa mutumi vimbiso yekuverengerwa uye yekuita kuti mugamuchiri azive zvinotarisirwa kwaari. Zvisineyi, nekutora mutsara wakapusa wakadai sewokuti: "Kuramba uinawo kune rumwe ruzivo ...", pane mukana mukuru wekuti hauzoverengwa. Zvechokwadi zvakajairika.
Mafomati anehuremekedzo pamagumo eemail anogadzirwa nemitsara isina kufanira anofanirwa kudzivirirwa. Kwete chete ivo havawedzere kukosha kune meseji, ivo vanoita sevasina zvazvinoreva uye vanogona kushora iye anotumira.
Kupfuura mamiriro ekunyora, inotangwa nezvidzidzo zvakati kuti zvisina kunaka maitiro ane chekuita nekusaziva kwedu. Panzvimbo pezvo, vanosunda kuita zvinorambidzwa panzvimbo pokunzvenga. Somugumisiro, kutaura kworuremekedzo kwakadai sokuti “Ndapota ndishevedzei” kana kuti “Hatizokundikani ..
Maformula ari muchimiro chekuwedzera
Kuwanda kwezvakanaka hakukuvadzi, vanodaro. Asi tinoita sei nechirevo ichi cheLatin “Virtus stat in medio” (Kunaka pakati)? Zvakakwana kutaura kuti maitiro ane hunhu anogona kusarudzwa mumamiriro ezvinhu, kana aunganidza, anogona kukurumidza kusashanda.
Nokudaro, kutaura kworuremekedzo kwakadai sokuti “Toonana nokukurumidza, ivai nezuva rakanaka, noushamwari” kana kuti “Zuva rakanaka kwazvo, Noruremekedzo” kunofanira kudziviswa. Asi zvino, rudzii rweruremekedzo rwekutora?
Pane kudaro, sarudza matauriro aya ane hunhu
Paunenge wakamirira mhinduro kubva kumutori wako, chakanakira ndechekuti: "Ichimirira kudzoka kwako, ndapota ...". Mamwe matauriro eruremekedzo ekuratidza kuwanikwa kwako, “Ndokumbirawo muzive kuti munokwanisa kutibata” kana kuti “Tinokukokai kuti mutibate”.
Mashoko okuremekedza akadai sokuti “Ushamwari” kana kuti “Iva nezuva rakanaka” anofanira kushandiswa paunenge watojaira kukurukura nomunhu wacho.
Kana ari matauriro ekuremekedza okuti "Kuperera" kana kuti "Zvakanyanya kunaka", akakodzera mamiriro ezvinhu awakambokurukura kakawanda nemutauri wako.
Nezve chimiro chekuremekedza "Kutendeseka," unofanira kuziva kuti ishamwari uye yakarongeka. Kana usati wambosangana nemugamuchiri, iyi fomula ichiri kukwanisa kushandiswa.
Kupera kwetsamba, maitiro ane hunhu ekusiya Mbudzi 23rd, 2021Tranquillus
pashureSarudza maitiro ane hunhu anosanganisa kuzvipira uye hunyanzvi
zvinoteveraKutyisidzira kwekurwiswa kwerudzikinuro muFrance neGermany kwakaonekwa neANSSI neBSI
Nzira yekugutsikana sei mune unyanzvi hwokugadzirira?
Zvakavanzika zveemail yekuratidzira yakanyorwa zvakanaka